munyori: Laura Thomas
musha > Laura Thomas
Nguva yekuverenga: 7 maminitsi Kugara muchimiro wakati uchifamba pasina mubvunzo kukahadzika. Kudya zvekuyedza zvinogara zviripo. Izvi zvakasanganiswa nekuzorora mune yako yenguva dzose yekurovedza muviri tsika iyo inowanzo kukonzera kuwa kubva mungoro yekusimbisa. Saka munhu anogara sei akakodzera achifamba? Hazvina…
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi Munyika yose, kupinza kune zvakasiyana zvakasiyana nemaitiro, semuyenzaniso: Kupa mazano muSouth Africa kunodiwa, sezvazviri muUSA. Unotarisirwa kusiya zano repakati 15 uye 25% muAmerica, uye kana usingaite unokwanisa chaizvo…
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi Covid-19. Zvese zvatinoita sekunge tinogona kutaura nezvazvo, uye nokuda kwechikonzero chakanaka. utachiwana Izvi yakabata nyika uye zvachose zvakachinja maonero atinozviita upenyu hwezuva nezuva uye chokwadi Train Travel. Train Travel is a mode of transport many…